Yakha iblogi ngokukhawuleza kweminwe yakho | Polyblog
Yakha iblogi ngokukhawuleza kweminwe yakho
I-Polyblog ikunceda ukuba wenze lula ibhlog yeelwimi ezininzi kwaye ukhulise ishishini lakho ngokuthengisa umxholo.
Kutheni usebenzisa i-polyblog?
1. Ukukhawuleza kwaye kuKhaphukhaphu
Isantya kunye nokusebenza kakuhle kubalulekile kulo naliphi na ishishini. Siyayiqonda loo nto kwaye ke siye sakha iqonga elikhawulezisa inkqubo yakho yokuthengisa umxholo.
2. Guqula umxholo wakho ngokulula
Jonga kulo naliphi na ilizwe kunye naluphi na ulwimi kwaye ukhulise ishishini lakho kumazwe ngamazwe. Ukusebenzisa iNkqubo yethu yoLawulo loMxholo, unokulawula ngokulula ibhlog yakho yeelwimi ezininzi phantsi kwedeshibhodi enye.
3. Uyilo oluncinci
Sikholelwa kubulula. Yiyo loo nto siya kwenza ibhlog yakho icoceke kwaye ilula kuyilo. Nantsi isampuli yendlela ibhlog yakho eya kujongeka ngayo xa uyakha ngePolyblog.
4. SEO ilungiselelwe
I-SEO isisiseko sayo yonke imizamo yakho yokuthengisa umxholo. Ukufumana i-traffic search ye-organic evela kuGoogle kubalulekile kuyo nayiphi na ibhlog. Yiyo loo nto sichithe izixhobo ezininzi ukwenza ibhlog yakho ye-SEO inobubele.
5. Ukusingathwa okulawulwa ngokupheleleyo
Akukho mfuneko yokujongana nentloko yokulawula iiseva zakho. Sinikezela ngokukhawuleza kakhulu kwaye kuthembekileyo ukusingathwa kwewebhu.
Ezinye iinyani ezinomdla malunga nokuthengiswa komxholo
“Iipesenti ze-77 zabantu bafunda rhoqo iiblogi kwi-intanethi”
“Iipesenti ze-67 zeeblogi ezithumela imihla ngemihla zithi ziphumelele”
“Ipesenti ze-61 zabasebenzisi be-intanethi e-US bathenge into emva kokufunda iblogi”
1. Bhalisa kunye nokuseta
Bhalisa ngePolyblog kwaye udibanise iPolyblog kunye newebhusayithi yakho. Kufuneka ufake idilesi ye-imeyile kunye nesizinda sewebhusayithi.
2. Yongeza amanqaku
Nje ukuba amanqaku akho elungile, ungawongeza kwibhlog yakho usebenzisa iPolyblog dashboard. Nje ukuba uzipapashe, umxholo wakho uya kuhlala kwibhlog yakho.
3. Khangela ukukhula kwakho kwe-SEO kwikhonsoli yakho yokukhangela
Siza kukhathalela i-SEO yobugcisa kuwe. Siza kuvelisa ngokuzenzekelayo iimephu zesayithi kwaye sizilayishe kwi-Google Search Console yakho. Ekuphela kwento ekufuneka uyenzile kukulandelela ukukhula kwakho kuGoogle Search Console.
Ndingasebenzisa isizinda esilungiselelweyo?
Ewe, ungasebenzisa i-domain yesiko kunye nazo zonke izicwangciso zethu. Kuya kufuneka nje usete indawo yakho ngenkqubo yethu.
Nguwuphi umahluko phakathi kwePolyblog kunye nezinye iinkqubo zolawulo lomxholo?
IPolyblog yenzelwe ngokukodwa ulawulo lomxholo weelwimi ezininzi. Zininzi izibonelelo zokuthengisa umxholo weelwimi ezininzi kodwa ngokuqhelekileyo ukuwuphumeza kunzima. I-Polyblog yenza kube lula kakhulu ukulawula nokukhuthaza ibhlog yeelwimi ezininzi.
Ngaba kufuneka ndikhulise ibhlog yam ngesantya sephepha kunye nezinye izinto zobugcisa be-SEO?
Akunjalo kwaphela, iPolyblog sele ilungiselelwe zonke izinto ezibalulekileyo zobugcisa ze-SEO ezifana nesantya sephepha, ulwakhiwo lwekhonkco, imephu yesayithi, iithegi zemeta, kunye nokunye.
I-Polyblog yenzelwe ngokukodwa iziqalo ezifuna ibhlog ekhawulezayo nephendulayo kuhambo lwabo lokuthengisa umxholo.
Ngaba kufuneka ndifake iiplagi kunye nemixholo?
I-Polyblog sele iza nomxholo ococekileyo, ophendulayo kwaye zonke iimpawu oza kuzifuna zifakwe kwangaphambili. Ngale ndlela unokuqalisa ngebhlog yakho ngokukhawuleza kwaye ugxininise ngokucacileyo ekupapasheni umxholo okumgangatho ophezulu ngaphandle kokukhathazeka kakhulu kubugcisa.
Ngaba ungandibonisa umzekelo weblogi eyakhiwe ngePolyblog?
Ngokuqinisekileyo, jonga ibhlog yomnye wabathengi bethu abaphezulu: https://www.waiterio.com/blog
Sibhalele wethu uthi Molo